Gülermak Oo Saxiixay Heshiiskii Dubai Metro 2020 | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiyaShirkadda Gulermak Dubai Metro waxay saxiixday heshiis 2020
10 / 10 / 2016 Aasiya, DUNIDA, KENTİÇİ Systems Rail, Metro
Gülermak wuxuu saxeexay Dubai Metro 2020 Heshiis: Hogaanka Alstom, heshiiska u dhexeeya Expolink iskaashatada oo ay ku jiraan Gülermak iyo ACCIONA iyo RTA (Maamulka Wadooyinka & Gaadiidka) ayaa ay saxiixeen dhinacyada. Sida ku xusan heshiiska, hay'adda Expolink ayaa fulin doonta kordhinta khadka 'Red Metro Line' ee Dubai iyo horumarinta nidaamka jira.
Wadarta qiimaha shaqooyinka waxay noqon doontaa 2,6 bilyan euro. Alstom wuxuu helayaa kala badh qiimahan. Kala badh kale waa la wadaagi doonaa inta udhaxeysa ACCIONA iyo Gülermak. Khadkan cusub wuxuu isku xirayaa bartamaha magaalada iyo Expo 2020 waxaana lagu furi doonaa 2020.
Baaxadda mashruucan dhexdeeda, wadar dhan xNUMX km ayaa la dhisi doonaa oo ay ku jiraan 11,8 km dhulka dushiisa iyo 3,2 km dhulka hoostiisa. Khadku wuxuu ka bilaaban doonaa Nakheel Harbor & Tower station illaa ballaarinta khadka metrooga cas ee hadda socda. Saldhigga cusub wuxuu lahaan doonaa wadar dhan 15 saldhig.
Antalya waxay heshiis la saxiixatay Bankiga Iller ee loogu talagalay Wagons
DESA waxay saxiixday Heshiiska Sales iyo Adeegga R2P
Shirkadaha Turkigu waxay bixiyaan Billadaha ugu wanaagsan Dubai Route 2020 Metro Submership
Garoonka Diyaaradaha ee Dubai Al Maktoum wuxuu furan yahay 2020
Turkey ayaa dadajinaya shaqada on xarunta cusub ee ski